“ब’च्चा नहुने म’हिलाला’ई ‘ब”च्चा’ हुने ब’नाइदिने भ’न्दै बा’बा आ’फैं जु’टेपछि…. – Sudur Samaj
“ब’च्चा नहुने म’हिलाला’ई ‘ब”च्चा’ हुने ब’नाइदिने भ’न्दै बा’बा आ’फैं जु’टेपछि….
बच्चा हुने बनाइदिने भन्दै बाबा आफैं जुटेको पाइएको छ । घ,टना उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊको हो । त्यहाँ काले बाबा नाम गरेको एक मानिस यसका लागि चिकित्सा विज्ञानले केही उपायहरु समेत पत्ता लगाएको छ । तर कोही कोही धार्मिक अनुष्ठानमा बिश्वास गर्छन् । शक्तिपीठ र बाबाहरुको भर पर्छन् । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्।
भारतमा भने अचम्मको घटना भएको छ । बच्चा नभएको भन्दै आएकी महिलालाई बच्चाहुने बनाइदिने भन्दै बाबा आफैं जुटेको पाइएको छ ।घटना उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊको हो । त्यहाँ काले बाबा नाम गरेको एक मानिस थिए । जो यस मामिलामा त्यहाँ चर्चा पाएका थिए । आजतकमा छापिएको समाचार अनुसार स्थानीय व्यक्तिले सूचना पाएपछि घ,ट,नास्थलमा पुगे ।
यस्तो कार्यमा संलग्न रहँदै गर्दा देखेर भिडियो बनाएका थिए । जसको भिडियो सोशल मीडियामा भाइरल स्थानीय मानिसहरूले बाबा, महिला र उनका एक व्यक्तिलाई यस्तो कार्यमा संलग्न रहँदै गर्दा देखेर भिडियो बनाएका थिए । जसको भिडियो सोशल मीडियामा भाइरल भएको थियो । प्रहरीले बाबालाई पक्राउ गरी जेल पठाएको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्।**
जानकारीका अनुसार लखनऊको पुलिस स्टेशन हुसेनाबादका एक बाबाले बच्चा नहुनेलाई बच्चा हुुने बनाइदिने । भन्दै उपचार गर्ने गरेका थिए । उनले महिलालाई मात्र आफ्नो कोठामा प्रवेश दिन्थे । अनै तिक काम गर्ने गर्थे । पश्चिमी क्षेत्र चौकी क्षेत्रका एसीपी आईपी सिंहका अनुसार काले बाबालाई प#क्राउ गरिएको छ । सांकेतिक तस्बिर
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्।
उर्मिलाले थाकेपछि अन्तिम पटक आफ्नी सहकर्मी साथीलाई यसो भनेकी रहेछिन्
यो’ ‘नी बाट सेतो पा’नी आ’उने र चि’लाउने स’मस्या के हो ?